Otu esi echekwa atụmatụ data anyị na ekwentị mkpanaaka gam akporo | Akụkọ akụrụngwa
Etu ị ga - esi bulie ojiji nke data na ekwentị mkpanaaka anyị
Ọ bụrụ na anyị azụtara ekwentị mkpanaaka na sistemụ arụmọrụ gam akporo, mgbe ahụ, a ga-ejikọkwa ya na akara ekwentị; dabere na onye ọrụ nke nyere anyị ọrụ ahụ, ọ ga-abụ ego ga-akwụ anyị n’ọnwa n’ọnwa.
Ugbu a, ọ bụrụ na anyị enwetala ekwentị anyị, anyị ga-amalite na-eme nchọgharị nke ọ bụla n'ime ọrụ ahụ, Playlọ Ahịa Google iji budata ma wụnye ngwa gam akporo yana n'ezie, ohere nke lee vidiyo YouTube ma gee egwu egwu, ihe ndị nwere ike iri nnukwu data ewepụtara na onye ọrụ ekwentị. Ọ bụrụ na anyị eleghara anya n'oge ọ bụla wee malite ịme ihe niile na ekwentị anyị, anyị ga-enweta ụgwọ dị elu nke ukwuu na njedebe nke ọnwa. N'ihi nke a, ugbu a anyị ga-ekwu ole na ole ndụmọdụ na ndụmọdụ iji chekwaa oriri nke data ndị a butere.
1 Jikọọ ngwaọrụ gam akporo na Wi-Fi
2 Chọpụta ngwa ndị na-eri data anyị
3 Budata Ngwaọrụ gam akporo na Wi-Fi Naanị
4 Nwee ọrụ nkwanye na ekwentị anyị
5 Gbanyụọ ndabere melite
Jikọọ ngwaọrụ gam akporo na Wi-Fi
Ihe nzuzo na-emeghe bụ nke a, yabụ, ọ bụrụ na n'otu oge anyị hụrụ ekwentị mkpanaaka ebe ọ bụla anyị maara na enwere njikọ Wi-Fi n'efu, anyị kwesịrị iji ya na-amalite na-eme nchọgharị na ngwa ma ọ bụ na Internet ma si otú, na-eri na-eri nkwekọrịta. Na mgbakwunye na nke a, na ebe ọrụ dị iche iche (na ugbu a, na ụlọ ọrụ ọha na eze) enwere n'ozuzu ọtụtụ njikọ Wi-Fi anyị nwere ike ịnweta. Ọ bụrụ n’ọrụ anyị, sọsọ anyị ga-etinye nwoke nzere ohere ijikọ na netwọk ikuku.
Chọpụta ngwa ndị na-eri data anyị
Ọ bụrụ na ekwentị mkpanaaka anyị nwere sistemụ arụmọrụ Android 4.3 n'ihu na ebe ahụ ebe anyi no enweghi njikọ Wi-Fi nke nnwere onwe nnwere onwe, mgbe ahụ anyị nwere ike ịnwe ntakịrị aghụghọ iji nọgide na-enwe ike iji data nkwekọrịta ahụ.
Naanị anyị ga-aga nhazi ahụ (ma ọ bụ mgbanwe) wee mechaa, họrọ nhọrọ nke na-ekwu "Jiri data" (ma ọ bụ Neti Neti); ebe a ka anyị naanị ịnyagharịa na ala ihuenyo iji nyochaa nke n'ime ngwa niile arụnyere na-etinye data kachasị na ọnụ.
Budata Ngwaọrụ gam akporo na Wi-Fi Naanị
Laghachi na ndụmọdụ anyị nyere na mbụ, iji netwọk Wi-Fi bụ ihe ngwọta kachasị dị irè ịnwe mgbe ị na-echekwa data; dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na anyị bụ ndị ahụ hụrụ n'anya budata ngwa na ekwentị mkpanaaka gam akporo, Anyị kwesịrị ịrụ ọrụ a naanị mgbe ejikọrọ anyị na netwọk ikuku a. Mgbe ịbanye n'ụlọ ahịa ma họrọ ngwa iji budata, ngwá ọrụ ahụ (ọ dị nwute, ọ bụghị ha niile) nwere ike iru na-atụ aro onye ọrụ iji naanị Wi-Fi na netwọk iji budata ya, ihe anyị kwesịrị ịnakwere n'echeghị echiche ugboro abụọ.
Nwee ọrụ nkwanye na ekwentị anyị
Tọ ụtọ ụdị dị iche iche nke gụgharia nwere ike ịbụ otu n'ime nnukwu ndị na-emejọ mgbe ọ bịara ichoputa onye ghaworo data kachasi nma; N'ihi nke a, anyị kwesịrị ịtụle ihe Spotify, Pandora, NetFlix ma ọ bụ ọrụ ọ bụla ọzọ na-enye anyị ohere ile vidiyo ma ọ bụ gee egwu sitere na weebụ na-eme ugbu a.
Aro anyị na-enye site na mbido dịkwa ire ugbu a, ya bụ, anyị kwesịrị ịnwale nwee ọ servicesụ ọrụ ndị a na-asọba naanị mgbe ejikọrọ anyị na netwọk ikuku Wi-Fi. Ngwa ole na ole na-enye gị ohere iji ha na-anọghị n'ịntanetị, nnukwu uru dị ukwuu mgbe ị na-ege egwu ma ọ bụ na-ekiri vidio nke nsụgharị YouTube na Spotify na-enyekarị gị na ekwentị ndị a.
Gbanyụọ ndabere melite
Ọtụtụ oge anyị anaghị achọpụta ọnọdụ a, mana ọ bụrụ na anyị nwere ụfọdụ ngwa awụnyere na ekwentị mkpanaaka, otu ga-ahazi imelite na-akpaghị aka mgbe enwere ụdị ha ọhụụ, ihe nwekwara ike ịnọchite anya oriri nke data enwetara.
Maka nke a, ọ dị mkpa itinye ntọala ụlọ ahịa ma nyochaa mpaghara nke ngwa anyị arụnyere. Ozugbo anyị garịrị gbanyụọ nhọrọ a site na «mmelite na-akpaghị aka».
N'ikpeazụ, a chọpụtalarị ihe siri ike iji mee ihe na "Nkọwa nke njedebe Data Mobile"; Anyị ga-ahụ nhọrọ a n'elu menu n'okpuru "Ojiji data", naanị ịnwezie oke ojiji data a site na ịmị akara uhie site na elu ruo na ala.
Site na ịgbaso ụfọdụ ndụmọdụ anyị nyere gị ga-enwerịrị ụgwọ oriri enyi na njedebe nke ọnwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Etu ị ga - esi bulie ojiji nke data na ekwentị mkpanaaka anyị
Etu esi egwu slide ma obu nwayọ na Windows
Otu esi achọta ihe nkiri nke ihe nkiri 2 kachasị amasị gị